Pejy an-tsary : Fitsidihana ny tany Antsiranana
Published Date: 24 septembre 2021
Fitsarana andry ho an’ny firenena:
90 andro ho an’ny fiovana
Fanamby mazava ary tsy maintsy ho tanteraka ao anatin’ny 3 volana. Fanafainganana ny raharaham-pitsarana no tanjona. Ny fanatrarana ny taha 70/30 no mari-drefy hita maso sy azo tsapain-tanana, 70% voafonja no voatsara, 30% sisa miandry fitsarana.
Tontosa tao Antsiranana androany Zoma 24 Septambra 2021, ny fitsidihana ny fonja notarihin’ny Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana,­ ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy. Nohenoina, noraiketina an-tsoratra hoenti-mandroso sy manatsara ny asa ireo fangatahana sy taraina.
Ankoatra izay, tontosa ihany koa ny dinikasa tao amin’ny Fitsarana Ambony (Cour d’Appel) niarahana tamin’ireo Mpitsara sy Mpiraki-draharaha ary Mpandraharahan’ny Fonja.
Namaranana ny asa ny fanolorana ofisialy ny « logiciel » hanampy amin’ny fanatsarana sy fanamorana ary fanafainganana ny asa eo anivon’ny Tribonaly misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana (Tribunal Administratif), ny Fitsarana misahana ny lafiny ara-bola (Tribunal Financier) ary ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (Tribunal de Première Instance).
← Pejy an-tsary : Fidinana ifotony tao amin’ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ao Morondava.
Pejy an-tsary : Fidinana ifotony tampoka natao tao amin’ny Fonjan’Antanimora →